सुनैसुनको पहाड भेटियो ! खन्दै, माटो पखाल्दै, सुन निकाल्दै पूरा हेर्नुहोस « गोर्खाली खबर डटकम
सुनैसुनको पहाड भेटियो ! खन्दै, माटो पखाल्दै, सुन निकाल्दै पूरा हेर्नुहोस
काठमाडौं। ठूलो पहाडमा सुनैसुन भरिएको छ भन्ने खबर फैलियो भने के होला ? सुनजस्तो बहुमूल्य धातु पाउन त्यहाँ मानिसहरुको भीड अवश्यक लाग्छ । यस्तै सुनैसुनले भरिएको पहाड भेटिएपछि सुन खन्नको लागि स्थानीयको भीड लागेको
भिडियो पछिल्लो समय भाइरल भइरहेको छ ।पत्रकार अहमद अलगोहबरीले ट्वीटरमा सार्वजनिक गरेको यो भिडियो अफ्रिकी देश कंगोको भएको बताएका छन् । यहाँको एक पहाडमा ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म सुन भएको बताइएको छ जहाँ अहिले माटो खनेर, धुलो पखालेर सुन जम्मा गर्ने मानिसको भिड लागेको छ ।
यो पनि पढ्नु होस:-तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेका पुरुषको जब डक्टरले जाँच गरे, डाक्टर नै तर्सिए
काठमाडौ । ब्राजिलको साओ पाउलोमा एक व्यक्ति तीन मिर्गौलाका साथ जिउँदो छन् । जो अहिले सामान्य रूपमा काम गरिरहेका छन् । यो कुरा तब बाहिर आयो जब ति व्यक्तिको तल्लो पेटर दुखेर उनी अस्पताल चेकजाँचकालागी गएका थिए । उनको पटेमा तीनओटा मृ,गौला देखेर डक्टर नै तर्सिएका थिए ।जानकारी अनुसार ३८ वर्षीय ति व्यक्ति डाक्टर कहाँ गएका थिए ।
उनलाई त्यहाँ सीटी स्क्यान गर्न सल्लाह दिइयो । स्क्यान रिपोर्टले तीन मिर्गौला भएको कुरा पुष्टि गर्यो । अनुसन्धानले स्लिप डिस्क समस्या पत्ता लगायो र उपचार गरियो । न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिन पत्रिकामा प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार ति व्यक्ति ब्राजिलको राजधानी साओ पाउलोका हुन्